Wena - umshayeli oseneminyaka engu-, futhi ungalokothi okwephula imithetho yomgwaqo? UKUTHI ukudlula wena - inqubo saziso? Ngeshwa, asikwazi ukuthathelwa umshuwalense ngokumelene izimo ezingalindelekile phezu umgwaqo ovulekile. Izingozi okungazelelwe ukuphahlazeka izimoto - lokhu Kufanele sihlale sikulungele. Zesinyathelo okufanele basithathe ezimweni ezinjalo? Ngokushesha shayela iloli donsa e Mytishchi noma kwenye esifundeni eMoscow.
Uma kudingeka iloli donsa?
Isizathu ezijwayeleke kakhulu umshayeli kungase kudingeke iloli donsa - ngengozi. Uye wayihlola emotweni, kodwa abatholanga umonakalo ebalulekile bese sinquma ukuqhubeka ukushayela? Kakhulu ungakwenzi. Ngisho uma bengenayo zibukeke avele ukuthatha izinto ngokungathí sina, ukuya emotweni, wagibela ingozi, akunakwenzeka.
Okokuqala, ungakwazi neze ukucacisa ukuthi kwembulunga yonke inkinga, ngakho ukuqhubeka ukunyakaza, engozini enkulu. Okwesibili, uma ufuna ukuthola isinxephezelo izinkampani zomshuwalense, kufanele ahlinzeke imoto ethengiswayo ungaphakathi kwindlela kwaba ngokushesha ngemuva kwengozi.
Abanye abashayeli ingozi, zama ukuxhumana nabangani, noma ukucela usizo kwabanye abasebenzisi bomgwaqo. Ochwepheshe categorical. WezokuThutha imoto ilimele lot yokupaka egalaji noma workshop kufanele kube kuphela esebenzisa imishini ekhethekile. Kuphela kuleli cala, imoto Siyaqiniseka izonikelwa yibo bonke imithetho.
Esinye isizathu esenza kubalulekile ukuxhumana nesevisi ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi - engozini yemoto. Ngosizo ezokuthutha ekhethekile umshini uzobe ngokucophelela ayiswe igalaji, lapho Ochwepheshe uyoqeda inkinga. Njengoba esimweni sokuqala, zama ukuhambisa ngaphansi kwamandla abo noma ushayele umngane - hhayi zinkulu.
Imishini ekhethekile kungadingeka esimweni lapho imoto ngokuqinile washaya udaka noma bephume komgwaqo. Tow iloli izofika ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngosizo imishini ekhethekile kungenziwa bebuyela emotweni ithrekhi yisiphi isikhundla futhi imodeli. Ngokushesha shayela dispatcher udinga futhi uma izimoto eside wema yokupaka (egcekeni) ngeke ukuqala.
Tow iloli kungadingeka futhi abashayeli abayizikhohlwa waxosha ye-lot yokupaka, kodwa akukho livela ngesikhathi inzwa uphethiloli ithangi. Ngokuvamile uphethiloli ugcina maphakathi, namakani ebhuthini singanikezwanga. Isixazululo sale nkinga, kuba ucingo ukuze inkampani, ukuhlinzeka amasevisi Car basishiye. Izimoto Special ukufika ngokushesha ngangokunokwenzeka, izimoto uyiswa ukugcwaliswa esiteshini esiseduze.
Tow amaloli ayadingeka zokuthutha (endaweni epaka izimoto ngaphambi amaphoyisa omgwaqo) of izimoto ezintsha, okuyiwona abanikazi angakawamukeli imibhalo yokubhalisa. Ezisekelweni ethutha izimoto aqueous, Scooters, izithuthuthu kanye nokunye. D.
Indlela ushayele iloli donsa?
Lyubertsy iyala iloli donsa noma kwenye indawo kumelwe siqiniseke ukubiza. Kuyadingeka ukucacisa uhlobo imoto futhi imodeli. Kuyinto - kubalulekile, ikakhulukazi uma umshini ifakwe i automatic transmission noma okukhethekile (rarity). Qiniseka ukuchaza dispatcher isizathu lapho udinga imishini ekhethekile (ingozi, iphutha, ethutha nezinye izimoto nokunye. D.). It ivumela ukuthumela ekhelini elibonisiwe ncamashi uhlobo iloli donsa, okungase ukuthutha izimoto ngaphandle kwezinkinga.
amasevisi ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi abasebenza ubusuku nemini. Usizo lwabo ningaqiniseka ukuthi zonke izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, futhi izindleko zokwelapha ezizoba yeningi kakhulu. Ngaphambi ushiya yokupaka, qiniseka ukubhala phansi ifoni notebook yeselula, ungabiza dispatcher.
Iyini indlela ephumelela kunazo zonke amaphela?